Jesosy irery ihany ve? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2016-01 mpandimby ny Magazine > I Jesosy ve no lalana tokana?
Ny olona sasany dia mandà ny finoana kristiana fa amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy ihany no ahazoana famonjena. Ao amin'ny fiaraha-monina misy antsika pluralistic dia antenaina ny fandeferana, eny fa na dia takiana aza, ary ny foto-kevitry ny fahalalahana ara-pinoana, izay mamela ny fivavahana rehetra, dia adika indraindray mba hitovizan'ny fivavahana rehetra amin'ny farany.
Ny lalana rehetra dia mankany amin'Andriamanitra iray ihany. Ny olona sasany dia milaza izany toy ny hoe efa teny an-dàlana izy ireo ary izao niverina avy any amin'ny toerana itodiana izao. Ny olona toy izany dia tsy mandefitra amin'ireo olona tery saina izay mino fa tsy misy afa-tsy làlana tokana ary lavina ny fitoriana filazantsara. Rehefa dinihina tokoa, hoy izy ireo, dia fanandramana manafintohina hanovana ny finoan'ny hafa izany. Fa ny tenan'izy ireo ihany dia te hanova ny finoan'ireo olona izay mino ny fomba tokana. Ahoana izany izao? Mampianatra ve ny finoana kristiana fa Jesosy irery ihany no làlana mitondra mankany amin'ny famonjena?
Ny ankamaroan'ny fivavahana dia miavaka ihany. Ny ortodoksa jiosy dia milaza fa manana ny tena lalana. Ny silamo dia milaza fa mahalala ny fanambarana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra. Mino ny Hindou fa marina izy ireo ary mino ny tenany ny Bodista. Na ny pluralista maoderina dia mino fa ny pluralism dia marina kokoa noho ny hevitra hafa.
Ka ny lalana rehetra dia tsy mitarika mankany amin 'Andriamanitra iray ihany. Ny fivavahana samy hafa aza dia mamaritra ny andriamanitra samy hafa. Ny Hindoa dia manana andriamanitra marobe ary mamaritra ny famonjena ho fiverenan'ny zava-poana. Ny Silamo kosa dia manantitrantitra ny finoana tokana sy valisoa avy any an-danitra. Na ny Silamo na ny Hindou dia tsy hanaiky, fa mitarika tanjona iray ihany ny fomban'izy ireo. Aleon'izy ireo miady toy izay manova izany toe-tsaina izany. Ireo pluralista tandrefana dia hahita ny tenany ho olona manambany tena sy tsy mahalala. Fa faniratsirana na fanafihana ny fivavahana mihitsy no tena tsy tian'ny pluralista. Mino izahay fa ny hafatra kristiana dia marina ary miaraka amin'izay dia avelao ny olona tsy hino azy. Araka ny fahazoantsika azy, ny finoana dia mitaky fahalalahana hamela ny olona tsy hino azy. Fa na dia miaro ny zon'ny olona hisafidy izay hino aza isika dia tsy midika izany fa mino isika fa marina ny fivavahana rehetra. Ny famelana ny olon-kafa hino ny zavatra tadiaviny dia tsy midika hoe tokony hitsahatra tsy hino izany isika satria Jesosy irery ihany no làlana mankany amin'ny famonjena.
Milaza amintsika ny mpianatr’i Jesosy voalohany fa izy no hany lalana mankany amin’Andriamanitra. Nilaza izy fa tsy afaka ny ho ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny olona iray raha tsy manaraka izany (Mat 7,26-27) ary tsy miaraka aminy mandrakizay isika raha mandà Azy (Mat 10,32-33). Hoy koa i Jesosy: “Fa ny Ray tsy mitsara olona, ​​fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka, mba hanajan’izy rehetra ny Zanaka tahaka ny fanajany ny Ray. Izay tsy manaja ny Zanaka dia tsy manaja ny Ray izay naniraka Azy” (Jaona 5,22-23). Nilaza i Jesosy fa Izy no lalan’ny fahamarinana sy famonjena ary ny olona mandà azy dia mandà an’Andriamanitra koa.
Ao amin'i Johannes 8,12 Hoy izy hoe “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao” ary ao amin’ny Jaona 14,6-7 manao hoe « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako. Rehefa nahalala Ahy ianareo, dia ho fantatrareo koa ny raiko; Ary hatramin’izao dia mahafantatra Azy ianareo sady efa nahita Azy”. Jesosy mihitsy no nilaza fa diso ny olona milaza fa misy fomba hafa hahazoana famonjena. Nazava tsara toy izany koa i Petera rehefa niteny tamin’ireo mpitondra jiosy hoe: “Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, ary tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona hahazoantsika famonjena.” ( Asan’ny Apostoly. 4,12).
Nohazavain’i Paoly indray izany rehefa nilaza izy fa ny olona tsy mahalala an’i Kristy dia maty noho ny fahotany sy ny fahotany (Efesiana). 2,1). Tsy nanana fanantenana izy ireo ary na dia teo aza ny finoany ara-pivavahana dia tsy nanana an’Andriamanitra (and. 12). Nilaza izy fa iray ihany ny mpanelanelana, iray ihany ny lalana mankany amin’Andriamanitra (1. Timoty 2,5). Jesosy no vidim-panavotana ilain’ny olona rehetra (1. Timoty 4,10). Raha misy lalana hafa mitondra mankany amin’ny famonjena, dia Andriamanitra no namorona izany (Galatiana 3,21). Amin’ny alalan’i Kristy no ihavanana amin’Andriamanitra izao tontolo izao (Kolosiana 1,20-22). Nantsoina hitory ny vaovao tsara tany amin’ny Jentilisa i Paoly. Tsy nisy vidiny, hoy izy, ny fivavahany4,15). Efa voasoratra ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo fa tsy misy lalana tsara noho i Kristy. Mifanohitra amin’ny fomba hafa rehetra, dia mandaitra izany (Hebreo 10,11). Tsy tombon-dahiny izany, fa ny fahasamihafana rehetra na tsia. Ny foto-pampianarana kristiana momba ny famonjena manokana dia mifototra amin’izay nolazain’i Jesosy sy izay ampianarin’ny Baiboly antsika, ary mifandray akaiky amin’ny hoe iza i Jesosy sy ny filantsika ny fahasoavana.
Mila ny famindram-po isika
Milaza ny Baiboly fa Zanak’Andriamanitra i Jesosy. Andriamanitra miendrika olombelona Izy. Nanome ny ainy ho famonjena antsika Izy. Nivavaka tamin’ny fomba hafa i Jesosy, nefa tsy nisy izany6,39). Tsy mahazo famonjena fotsiny isika satria Andriamanitra mihitsy no niditra teto amin’ny tontolon’ny olombelona mba hitondra ny vokatry ny fahotana sy hanafaka antsika amin’izany. Fanomezany antsika izany. Ny ankamaroan'ny fivavahana dia mampianatra karazana asa na manao toy ny lalana mankany amin'ny famonjena - manao vavaka marina, manao zavatra tsara, ary manantena fa ho ampy izany. Mampianatra izy ireo fa ny olona dia afaka ny ho ampy tsara raha miezaka mafy izy ireo. Na izany aza, ny finoana kristiana dia mampianatra fa mila fahasoavana isika rehetra satria na manao ahoana na manao ahoana ny ezaka ataontsika dia tsy ho ampy tsara mihitsy.
Tsy afaka atao izany satria ireo hevitra roa ireo dia mety ho marina miaraka amin'ny fotoana iray. Ny fotopampianaran'ny fahasoavana dia mampianatra, na tiantsika na tsia, tsy misy lalana hafa mankany amin'ny famonjena.
Ny fahasoavan'ny ho avy
Ahoana ny amin’ireo olona maty vao nandre momba an’i Jesosy? Ahoana ny amin’ireo olona teraka talohan’ny niainan’i Jesosy? Manana fanantenana koa ve ianao? Eny, manao izany izy ireo. Satria ny finoana kristiana dia finoana ny fahasoavana. Ny fahasoavan’Andriamanitra no namonjena ny olona fa tsy ny filazana ny anarana hoe Jesosy na ny fananana Vienne manokana. Jesosy dia maty noho ny fahotan'izao tontolo izao, na fantatry ny olona izany na tsia (2. Korintiana 5,14; 1. Johannes 2,2). Ny fahafatesany dia niharan'ny fanonerana ho an'ny rehetra, taloha, ankehitriny ary ho avy, na Palestiniana na Peroviana. Afaka matoky isika fa tsy mivadika amin’ny teniny Andriamanitra, satria izao no voasoratra: “Mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba hahitan’ny olona rehetra fibebahana.” (2. Petrus 3,9). Na dia tsy takatry ny saina aza ny lalany sy ny fotoanany, dia matoky azy ireo isika satria tiany ny olona noforoniny. Hoy i Jesosy: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa noho Izy no hamonjena izao tontolo izao” (Jaona. 3,16- iray).
Mino izahay fa nandresy ny fahafatesana i Kristy tafatsangana tamin'ny maty. Ka na ny fahafatesana aza dia tsy fariben'ny Andriamanitra sy ny olona. Hain'Andriamanitra ny manetsika ny olona hatoky azy ny famonjena azy. Tsy fantatsika hoe rahoviana ary rahoviana, fa afaka matoky ny teniny isika. Noho izany, afaka mino an'io isika, toy ny amin'ny fomba iray na amin'ny fomba hafa dia mitarika am-pitiavana sy tsy miovaova ny olona tsirairay izay efa niaina na mbola hiaina hino azy ho famonjena azy, na alohan'ny hahafatesany, mandritra na taorian'ny fahafatesany. Raha misy olona mitodika any amin'i Kristy amin'ny andro fitsarana farany, na farafaharatsiny hahafantatra ny zavatra nataony ho azy ireo, dia azo antoka fa tsy hiala aminy izy.
Fa na oviana na oviana no voavonjy ny olona sy ny fahatakarany ny famonjeny, dia i Kristy ihany no hamonjena azy. Tsy hahavonjy na oviana na oviana na oviana na oviana ny asa sy ny fikasana tsara, na dia mino izany aza ny olona, ​​satria raha ampy tsara izany dia ho voavonjy. Ny fitsipiky ny fahasoavana sy ny sorona nataon’i Jesosy dia midika fa tsy misy na inona na inona asa soa na asa ara-pivavahana mahavonjy na oviana na oviana. Raha nisy izany fomba izany, dia ho nataon’Andriamanitra ho tanteraka amintsika koa izany (Galatiana 3,21). Raha niezaka tamin-kitsimpo hahazo famonjena ny olona tamin’ny alalan’ny asa, ny fisaintsainana, ny fanevatevana, ny fahafoizan-tena, na ny fomba hafa, dia ho fantany fa tsy mahasoa azy ireo eo anatrehan’Andriamanitra ny asany sy ny asany. Ny famonjena dia avy amin’ny fahasoavana sy ny fahasoavana irery ihany. Ny finoana Kristiana dia mampianatra fa tsy mendrika ny fahasoavana kanefa azon’ny rehetra atao izany.
Na inona na inona lalana ara-pivavahana nalehan'ny olona, ​​dia azon'i Kristy tarihina hiala amin'ny lalan-diso izy. Izy irery no Zanak'Andriamanitra izay nanao ny sorompanavotana tokana ilain'ny tsirairay. Izy no mpitondra hafatra sy lalana tokana manaporofo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famonjeny. Jesosy mihitsy no nanambara izany. Jesosy dia miavaka sy miray amin'ny fotoana iray. Izy no lalana ety sy Mpanavotra an'izao tontolo izao. Io no làlana tokana mankany amin'ny famonjena nefa azon'ny rehetra idirana. Ny fahasoavan'Andriamanitra, naseho tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy, no tena ilain'ny olona tsirairay avy ary ny vaovao tsara satria azon'ny rehetra zahana. Tsy vaovao tsara fotsiny izany, vaovao mahafaly mendrika hiparitaka. DTena ilaina ny mieritreritra izay.